AZEXO Shop, Premium WordPress theme yeEcommerce | ECommerce nhau
AZEXO Shop, Premium WordPress theme yeEcommerce
Paunenge uine e-commerce bhizinesi, chitarisiko chinhu chakakosha chinobatsira kuvaka kuvimba pakati pevangangodaro vatengi. Ehezve, hazvisi zvese, nekuti iwe zvakare unodawo kukwana mashandiro uye maficha ekufambisa iwo maitiro ekutenga nekuvandudza ruzivo rwevatengi Dingindira reEcommerce senge AZEXO Shop inokupa iwe chaizvo zvinhu zvese izvi kusangana nezvinodiwa zvebhizimusi rako reEcommerce.
AZEXO Shop - Ecommerce theme
Uyu ndiwo musoro wenyaya electronic stores izvo zvinomiririra kunze nekusanganisira toni yezvinhu zvakagadzirirwa kuwedzera ruzivo rweEcommerce. Muchokwadi, iwo dingindira rakagadzirirwa kuti iwe ugone kugadzira akasiyana masayiti nenzira yekuti iwe ugone kuve nezuva nezuva zvitoro chitoro, boka rekutenga saiti, chitoro chekare chine zvigadzirwa zvepanyama, chitoro chine chirongwa chekubatana kana chekunze zvigadzirwa Unogona kugadzira chitoro chepamhepo zvigadzirwa zvemadhijitari kurodha pasi.
Kwete izvozvo chete, iyi theme yeCommerce inouya ne chitupa chechipo neWooCommerce Vouchers Plugin. Chimwe chinhu chekusimbisa ndechekuti iri WordPress theme yeEcommerce iyo inogadziriswa zvakanyanya, kuti iwe ugone kugadzirisa musoro, tsoka, pamwe nemativi epadivi.
Inosanganisirawo a fomu rekutumira neCMB2 API, pamwe neyakagadziriswa yekutsvaga basa inobvumira vatengi kushandisa mafirita kuti vawane chigadzirwa chavari kutsvaga nekukurumidza. Pamwe chete neizvi, dingindira rine zvigadziriso zvematemplate pane ese maviri runyorwa mapeji uye ega mapeji.
Nyaya iyi Ecommerce yeWordPress Iyo inouya neyakagadziriswa minda, yakatsanangurwa rondedzero mhando, akawanda-saiti rutsigiro, isingaperi scrolling, tsigiro yeGoogle Mepu, firita yedaro uye geolocation. Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti ichi ndicho chinyorwa chePrimiyamu chinogona kutengwa ne $ 59 uye pasina mubvunzo isarudzo yakanaka kwazvo yekugadzira chitoro chepamhepo nechitarisiko chakakomba uye chehunyanzvi, pamwe nekushanda kwakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Zvidzidzo uye zviwanikwa » AZEXO Shop, Premium WordPress theme yeEcommerce
Chii chinonzi Outsourcing uye ndeapi mabhenefiti kune Ecommerce?